တစ်ဦးကား Samui ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Samui ကားတစ်စီးငှားရမ်း Samui
Samui, ထိုင်းရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်း, အ Kra Isthmus ၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ကွေ့ ofThailand တည်ရှိသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့စွန်ပလွံ fringedbeaches, အုန်းသီးအာရှရပင်များနှင့်သိပ်သည်း, တောင်တန်းမိုးသစ်တောများအတွက်မသိ, ပေါင်းဇိမ်ခံ posh Spa မ်ား resortsand ရဲ့။ ဤသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကျွန်းအပေါငျးတို့သ countryas ကျော်ကနေအပြင်နိုင်ငံရပ်ခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ထံမှခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်။ အဆိုပါဒေသသည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်စျေးဝယ်အစက်အပြောက်များနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အစားအစာဆိုင်များတွင် renownedfor ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်း၏သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအားဖြင့် bewowed ဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့။ ယင်းဆွဲဆောင်မှုများထဲတွင် Mu Ko အန်း Thong အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့သွားရောက်သို့မဟုတ်ထွက်အံ့သြဖွယ်ဂီတ andchoreography နှငျ့ပွညျ့စုံတစ်အံ့မခန်းည theStarz ကမ္ဘာကပ်ဘာရက်အတွက်လုပ်ကြရမှာလည်း 12 metres.Visitors မှာအရပ်ရှည်ရှည်ရပ်တည်ရာဒေသအလိုက် Wat Phra ယိုင်အဖြစ်လူသိများ theBig ဗုဒ္ဓဗိမာနျတျောဖြစ်ပါသည်။ ဤအများနှင့်အများအပြားကပိုသည်အခြားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်တကွ, islandis ပို. ပို. ထိုင်းနိုင်ငံတွင် butalso အာရှတစ်ခုလုံး၌မသာပရီမီယံအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးဖြစ်လာ။
အဆိုပါကျွန်းပြည်မကနေကူးတို့ဖွငျ့ Ko Samui Airportor မှတဆင့်လေယာဉ်ဖြင့်ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ TheAirport ပုဂ္ဂလိကပိုင်နေ့စဉ်ပျံသန်းမှုကျွန်းကနေ toand လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ကျွန်းပေါ်တွင်ကြောင့်တက္ကစီ, ဘတ်စ်ကား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဘုံ Modes သာဖြစ်ခြင်း tuk-tuks နှင့်အတူလှည့်ပတ်ရရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်လွယ်ကူခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, ရောနှောလူအများစု-ဧည့်သည်များနှင့်ဒေသခံများအငှားကားများ၏အဆင်ပြေစေရန်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကားတစ်စီးနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏နေထိုင်များ၏ကြာချိန်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားမှတ်တမ်း streamlineyour နိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး option ကို notonly Samui အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းအပေါငျးတို့သညျအခွားအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ငှားတဲ့ကားကလပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
Samui တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီး booking
ငှားရမ်းတဲ့ကား Samui အားလုံးသင့်ရဲ့ခရီးသွားအဖြစ်ကောင်းစွာအရသာအဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် undoubtedlymeet လိမ့်မည်ဟုမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူပရီမီယံန်ဆောင်မှု cluboffers ။ အဆိုပါနေ့စဉ်ခရီးသည် toluxurious Converter နှင့်မိသားစု-ဖော်ရွေ SUVs မှ။ onoffer အားလုံးကားထွက်စစ်ဆေးနှင့်အကောင်းဆုံးမျှအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အဖိုးအခများနှင့်အာမခံနှင့်သင်၏ needs.And တွေ့ဆုံပါဝင်သည်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေရှာဖွေရေး filter များအသုံးပြုပါကတဦးတည်းလိုအပ်ပါတယ် whenyou ကားတစ်စီးငှားဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ andmore တတ်နိုင်ခဲ့ဘယ်တော့မှမရဲ့။
သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်စတင် asthe အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ပစ်ကပ်တည်နေရာရိုက်ထည့်ပါနှင့်ရက်စွဲများပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေပြု U အားလုံး driversto 21 နှစ်အသက်ကျော်ဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကားတစ်စီးငှားရမ်းသည့်အခါအောက်ပါတို့မှ theypossess တစ်ခုချင်းစီကိုသေချာစေရန် clients များအားပေး;
အဆိုပါငှားကားတစ်စီး Samuiclub ဖောက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကောင်းသောအခြေအနေများအတွက်, ရှိသမျှ vehiclesserviced နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ SamuiRent နှင့်အတူကားတစ်စီးငှားရမ်းတစ်ကား features အသစ်တွေလည်းပါဝင်အသုံးပြုခြင်း၏အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို;
- 24 / 7Service
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Mae Sot